Hubi Feejignaan Cajiib Ah Oo Nike Niinley Ah Lagu Shubay | Abuurista khadka tooska ah
Antonio Moubayed | | Dhiirrigelinta, dhowr
General Mills-ka caalamiga ah ee lala kaashado Nike iyo xidigga kubbadda koleyga Kyrie Irving, ayaa qaabeeyay qaar kabaha isboortiga ee dhiirrigeliya nasiib wanaag Charms, Cinnamon Toast Crunch iyo Kix cereals.
Taylor Gessell, Kaaliyaha Isgaarsiinta Suuqgeynta ee General Mills Partnerships, wuxuu sharxayaa in xamaasadda iyo waallida ay dadka qaar u qabaan badarka ay dhab ahaan la mid tahay xamaasadda iyo waallida aan ku aragno dadka kabaha kabaha. Labada dhaqanba waxaa ku jira dhaqan xagjirnimo, sidaa darteed waa fursad weyn in la mideeyo laba koox oo aad u xamaasad badan.
Labada kooxood, General Mills iyo Kyrie, waxay arkeen guusha fikradan marka hore, goorta markii ugu horreysay waxay iskaashi la sameeyeen shirkadda Nike siideynta xadidan ee nooca Nike Kyrie 4 ah Dhiirrigelinta hadhuudhka loo yaqaan 'Wheaties cereal'.
«Waxaan bilownay kabuubka 'Wheaties sneaker' anagoo u direyna 100 saameyn ku leh iyo su'aasha ugu weyn ee aan ka maqalnay macaamiisha waxay ahayd, 'Halkee ayaan ka iibsan karaa labo?'Ayuu yidhi Gessell. Marka waxaan dib ula xiriirnay shirkadda Nike fikradda ah in la sameeyo iskaashi ballaaran oo ku lug leh dalagyada kale. Waan ogayn in Kyrie uu xiriir la leeyahay badarka, sidaa darteed uu ku faraxsan yahay kaqeybgalka.
1 Ciyaaryahan Basketball iyo naqshadeeye
2 The Kyrie 4 Nasiib wanaag
4 The Kyrie 4 Kix
Ciyaaryahan Basketball iyo naqshadeeye
Kooxda Kyrie iyo Nike waxay ahaayeen lamaanayaal soo jiidasho leh. Laga soo bilaabo fikradda si loo soo saaro naqshadaha cajiibka ah, iskaashi heer caalami ah. Kyrie iyo kooxdiisu waxay ahaayeen maskaxda ka dambaysa noocyada badarka yaa hogaaminayey wada shaqeyntaas. Waxay qaateen walxaha iyo faahfaahinta nooc kasta waxayna dib ugulaqiyaaseeyeen kabaha isboortiga qaab isku mid ah. Kyrie, yaa leh feejignaan aan fiicnayn oo faahfaahsan.
Saddexda dacas ee ku jira "baakadka badarka" waxay leeyihiin astaan ​​dalag kasta oo ku taal carrabka, oo ay weheliso midabada iyo walxaha naqshadeynta ee kuxiran qaababka iyo cufnaanta badarka. Iyo, dhabarka hal kabood ee labada kabood, astaanta caanka ah ee General Mills 'G'.
The Kyrie 4 Nasiib wanaag
Fiirinta ugu dhow ee qaabka midabada leh ayaa muujineysa in xitaa ay leedahay qaabab marshmallow ah oo dhinacyada lagu habeeyay. Kali muuqaalada midabyo dhalaalaya, on the astaan ​​qaanso roobaad.
Tusaalaha Kyrie 4 Qorfe Cunto Cunto Waxay u egtahay sanduuqkeeda, midab dahab ah iyo baloog cad. Si kastaba ha noqotee, wareejinta qorfe-ku-dhiirrigelisay oo ku yaal dhinac kasta, waa waxa runtii indhaha soo jiita.
Midab huruud ah iyo qaab buluug geesinnimo leh oo kabaha Kix ah waa ku qancin naqshadda sanduuqa Kix. Xitaa waxay u muuqataa in Kix “Kiimikada” caanka ah ay ka soo baxaan dhinacyada kabaha. Waxay ka dhigeysaa qaybta badarka ee naqshadeynta.
Gudaha kabo kasta sidoo kale waxaa laga helaa daabacaad u eg hadhuudh. Faahfaahinta astaamaha waxaa lagu tolay inch kasta oo kabaha ka mid ah, laga soo bilaabo qorfe wareega ilaa marshmallows caan ah. Nike waxay ku guuleysatay inay si buuxda u qabato nuxurka nooc kasta oo badar ah. Waa wax lala yaabo in la arko sida ay uga soo noolaadeen sawir fudud, ilaa kabaha jireed.
Xigasho - General Mills
Sawirro - Nike
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » dhowr » Isboortiga Nike ee firileyda laga sameeyay
Amaan yar oo loo hayo Mac, halyeeyga farshaxanka halyeeyada u ah kumanaan filim Hollywood ah